ICzech Republic yamukela izihambi zase-US ezibuyayo
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izwe | Isifunda » ECzechia » ICzech Republic yamukela izihambi zase-US ezibuyayo
Izwe laseMelika lijoyina uhlu lwamazwe asengozini encane, avumela izivakashi zase-US ukuthi zingene eCzech Republic.
Ngaphansi kwe-COVID-19, iCzech Republic isebenzisa uhlelo lwerobhothi ukuthola izidingo zokungena ezivela emazweni ahlukene.
Izakhamizi zase-US zingahamba ngaphakathi kweCzech Republic izinsuku ezingama-90 njengesivakashi ngaphandle kwe-visa edingekayo.
Izimaski ze-KN95 noma ze-FFP2 ziyadingeka ukungena ezitolo, ezikhumulweni zezindiza, kuzo zonke izinto zokuhamba zomphakathi, amahhovisi eposi, namatekisi noma amasheya okuhamba.
Ngenye yalezozikhathi ebesizilindile sonke! Kusukela ngoJuni 21, izakhamizi zase-US ezingama-2021 zivunyelwe ukubuyela kwifayela le- I-Czech Republic ngaphansi kwemithetho efanayo ebisebenza ngaphambi kobhadane. Lokho kusho ukuthi izakhamizi zase-US zingahamba ngaphakathi kweCzech Republic izinsuku ezingama-90 njengesivakashi ngaphandle kwe-visa edingekayo.
Ngaphansi kwe-COVID-19, iCzech Republic isebenzisa uhlelo lwerobhothi ukuthola izidingo zokungena ezivela emazweni ahlukene. Izakhamizi, izakhamizi ezihlala unomphela, nabahlali isikhathi eside abavela emazweni anobungozi (aluhlaza) — kufaka phakathi ne-United States — bangangena eCzech Republic bengavivinywanga noma behlukanisiwe. Kusenemikhawulo kwamanye amazwe ahlukaniswa njengobungozi obuphakathi, obuphakeme, obuphakeme kakhulu nobungozi obukhulu. Imikhawulo isukela ekuvinjelweni kokungena kokuhamba okungabalulekile (njengokuvakasha nabangane abavakashelayo) noma amazinga ahlukene okuhlolwa nokuhlukaniswa. Inothi elilodwa elibalulekile: lesi simo esiluhlaza, esinobungozi obuphansi sisebenza ekungeneni eCzech Republic, kepha asisebenzi kuyo yonke indawo ye-EU noma yaseSchengen. Abahambi base-US kufanele bahlole noma yiziphi izidingo zomuntu ngamunye ezweni ngalinye abafuna ukulivakashela.
Uma usemhlabathini eCzech Republic, kunemithetho ethile okufanele uyazi. Isimo esiluhlaza, esinobungozi obuncane esivumela abahambi base-US ukuthi bangene ezweni. Kunezinyathelo ezingeziwe zezinto ezinjengokudla endaweni yokudlela (ngaphakathi nangaphandle), ukungena emnyuziyamu, ukuya emcimbini womphakathi, noma ukungena ehhotela. Kukho konke okuhlangenwe nakho okwenza iholide ikhumbuleke, abahambi bazodinga ukukhombisa okukodwa kokulandelayo:
ukuhlolwa kwe-PCR okungekho ngaphansi kwezinsuku ezintathu ubudala
isivivinyo esingesihle se-antigen esingaphansi kwamahora angama-24 ubudala
imijovo yomthamo owodwa: ubufakazi bezinsuku eziyi-14 zomthamo owedlule, ezinyangeni eziyi-9 ezedlule
imigomo yemithi emibili: ubufakazi bezinsuku ezingama-22 ngemuva koku-1st umthamo, ezinsukwini ezingama-90 ezedlule
imigomo yemithi emibili: ubufakazi bezinsuku ezingama-22 ngemuva koku-2nd umthamo, ezinyangeni eziyi-9 ezedlule
ubufakazi bezokwelapha bokululama ku-COVID-19 ezinsukwini ezingama-180 ezedlule
Abahambi kufanele futhi bahlole izindiza ezithile zokuhlola, izibuko zobuso, nezinye izidingo, ikakhulukazi uma zixhuma kwamanye amazwe. Izinkampani ngazinye zingaba nezidingo ezihlukile. Kungasiza ukuphatha imininingwane ephrintiwe nezinsizakusebenza ezingeziwe (isb. Buso) ukusiza ukuzulazula kuhambo lwakho ngokushelela.
Izivakashi zizophinde zifune ukupakisha ezinye izimaski ezithile zeCzech Republic. Izifihla-buso ze-KN95 noma ze-FFP2 (ezibizwa nangokuthi “imishini yokuphefumula”) ziyadingeka ukungena ezitolo, ezikhumulweni zezindiza, kuzo zonke izinto zokuhamba zomphakathi (kufaka phakathi amapulatifomu nezitobhi), amahhovisi eposi, namatekisi noma amasheya okugibela. Indwangu noma ezinye izifihla-buso zobuso ziyadingeka ezindaweni ezingaphandle lapho ukungahambisani nomphakathi kungenzeki khona. Le mithetho isebenza kuwo wonke umuntu, kufaka phakathi abahambi abagonyiwe abanobungozi obuphansi (obuluhlaza).
Ngokuqinisekile, kusenezinqe ezimbalwa ongagxumela kuzo, kodwa ngaphezu kwakho konke, sijabule ngokuthi ukuhamba kubuyile! “Kudala sikulindile lokhu,” kusho uMichaela Claudino, umqondisi weCzech Tourism USA & Canada. “Siyethemba ukuthi izivakashi zingazinika isikhathi sokubuka izinto ezidumile, kodwa futhi zazi amanye amagugu afihliwe eCzech Republic. Ukubheka nje ubuciko obumangalisayo, isiko, ukudla, iziphuzo, nobumnandi kuzokwenza uhambo lwakho lufanele umzamo owengeziwe. ”
Covid-19 I-Czech Republic ngamunye
Abalingani beFinnair noJuneyao Air kumzila weHelsinki-Shanghai nangaphezulu
IHilton 1, iHyatt 2, iMarriott ibe yi-5 kuphela ekusindeni kwebhizinisi le-COVID
I-Industrial Microbiology Market ku-4.95% CAGR phakathi...
Isiguli Sokuqala Sifakwe I-Pulmonary Arterial...
I-Ethiopian Airlines imemezela i-oda lamahlanu angu-777...